Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. सागको उद्घाटन भईसक्दा अझै सकिएन हिटिङ स्वीमिङ पुलको निर्माण – Emountain TV
सागको उद्घाटन भईसक्दा अझै सकिएन हिटिङ स्वीमिङ पुलको निर्माण
काठमाडौं, १६ मंसिर । १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)को उद्घाटन भईसक्दा पनि सातदोबाटो स्थित हिटिङ पौडी पोखरीको निर्माण अझै सकिएको छैन । सातदोबाटोको अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसरमा निर्माण भइरहेको पौडी पोखरीमा पानी त हालिएको छ । तर पानी तताउने लगायत अन्य प्राविधिक निर्माण भने अझै जारी छ ।
हिटिङ प्रणाली नेपालमा पहिलो पटक जडान हुन लागेको पौडी पोखरीको तयारी लगभग पुराहुन लागेको छ । हिटिङ पौडी पोखरीमा खेलाडीका लागि चाहिने स्ट्याण्ड लगायतका प्राविधिक पक्ष जडान भइसकेका छन् । भने पोखरी बाहिरको क्षेत्रमा टायल हाल्ने काम धमाधम भइरहेको छ । चेन्जिङ रुम र दर्शक बस्ने स्थानको निर्माण सकिन लागेको छ । पौडी पोखरी निर्माणमा खटिएका इन्जिनियर सबिन मर्हनजले पोखरीमा पानी हाल्ने काम भइसकेको र अव हिटिङको तयारी गरिरहेको बताउनुभयो ।
पोखरीमा १३ लाख लिटर पानी हालिनेछ । त्यसका लागि रिजर्भ ट्यांकीबाट पानीको व्यवस्था गरिएको छ । पानी तातो पारेर हालेपछि हिटिङ प्रणालीको परिक्षण हुनेछ । पौडी पोखरी बाहिरको स्थिति भने गञ्जागोल छ । पोखरी वरीपरीको क्षेत्र धुलाम्मे छ । छोटो समयमा धेरै काम गर्न पर्ने भएपनि सागको पौडी खेललाई कुनै असर नपर्ने गरिकाम गरेको पौडी संघका अध्यक्ष अशोक रत्न बर्जाचायले बताउनुभयो ।
जोडोको समयमा नेपालमा अभ्यास गर्न र खेल्नका लागि पौडी पोखरीको व्यवस्था छैन । यो समस्या राष्ट्रिय खेलाडीले अझ बढी भोग्दै आएका छन् । प्रतियोगीताको लागी पोखरी निर्माण नभइजेलसम्म लिङकन स्कुलको पोडी पोखरीमा प्रशिक्षण भइराखेको अध्यक्ष बर्जाचार्यले जानकारी दिनु भयो ।
सातदोबाटोमा बनिरहेको हिटिङ पौडी पोखरीले अब त्यो समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । हिटिङ पौडी पोखरीको निर्माणले खेलाडीलाई १२ महिनानै प्रशिक्षण गर्न मिल्ने र वर्षभरी प्रतियोगिता आयोजना गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । २०३८ सालदेखि शुरु भएको नेपाल पौडी संघ अहिले पौडी विकासमा जोडतोडले लागेको छ ।
पौडीका लागि भनेर ललितपुरको सातदोबाटोमा एक मात्र अन्तराष्ट्रिस्तरको पौडी पोखरी छ । कहिले पानी, कहिले पोखरीको समस्याले पौडी पोखरी राम्रोसंग सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । मौसमी खेलका रुपमा चिनिएको पौडीलाई बर्षभरी खेल्न योग्य बनाउन सरकार र पौडी संघको लगानीमा हिटिङ सिस्टमको पौडी पोखरी नेपालमा पहिलो पटक निर्माण भएको हो । कुल २३ करोड रुपैयाँमा निर्माणाधिन पौडी पोखरीमा संघले २० प्रतिशत र बाँकी सरकारले लगानी गरेको छ ।
१३ औं सागको समापन आज, पुरुष फुटबलको फाइनलमा नेपाल र भुटान भिड्ने
गौरिकाको अर्को कीर्तिमान, एउटै सागमा चार स्वर्ण
साग अन्तर्गतको बक्सिङमा नेपाललाई २ स्वर्ण
भारतसँग पराजित भएपछि प्रशिक्षकबाट दिए हरि खड्काले राजीनामा
साग पुरुष क्रिकेटमा नेपाललाई काश्य पदक
कराँतेमा नेपालको उत्कृष्ट प्रदर्शन
अपराजित रहँदै बालगोपाल महर्जन
१३ औं सागको नवौं दिन आज, १३ खेलमा प्रतिस्पर्धा हुँदै, महिला फुटबलको फाइनल नेपाल र भारत भिड्दै
१३ औं साग : पदक तालिकामा भारत शीर्ष स्थानमा, नेपाल दोस्रो
महिला क्रिकेटको स्वर्ण पदक बंगलादेशले जित्यो